"Nzira ina dzekupfira" - ndiro zita reshanduro nyowani yekushambadzira kubva kuJapan airbrush mugadziri Iwata. Iyo kambani iri kufungidzira iyo yakaoma, asi inonyanya kubatsira nhanho kune vanotanga, neiyi airbrush assortment kuva imwe yaunogona kuenzanisa sevashandisi vane ushamwari. Chinangwa pano ndechokupa avo vanofarira mabhuratha kuti vatarise zvakanaka nezve maitiro uye zvakanakira munhu mumwe nemumwe weanopfuura makumi matatu emabhurashi emhando, nekudaro achirerutsa kusarudzwa kwake iye nevamwe vake. Iwe unogona kunge uchiziva nezve dzakafanana sisitimu kubva pasirese yemitambo, apo kureva tennis racket ingasiyana pachiyero zvichienderana nekukurumidza kwayo kana kuita kwayo.
Iwata akapfira pfuti. Zvinoenderana nekusiyana kwejometri yezvinhu zvakasiyana zvemarudzi akasiyana pendi, nzira dzinotevera dzinowanzo kushandiswa kubata Iwata kupfira pfuti muJapan.
1. Inochinjika nzira yekusvina. Iyo nzira yekusvina yakananga. Bata pfuti yekupuruzira neruoko rwerudyi. Kutanga kubva kumusoro kuruboshwe ruoko rweanoshanda, fambisa spanner kubva kuruboshwe kurudyi. Ita rwendo rwekukurumidza rwekudzika uye kuruboshwe. Kazhinji, iyo yakasanganiswa yemukati ndeye 1/2, 1/3 uye 1/4, iyo inogona kuverengeka zvichienderana nemhando yekubika. Kana imwe nzvimbo yapera, svina imwe nzvimbo mukuteerana. Zvinoenderana netsika, kupuruzira kunokwanisawo kuitirwa kubva kune rimwe divi rechikonzero, kureva kubva kurudyi ruoko rweanoshanda kune rumwe rutivi rwokumusoro.
2. Longitudinal nzira yekusvina. Maitiro acho akafanana nenzira yakatenderedza yekusvipa, kunze kwekuti iyo nzira yeJapan Iwata yekupfira pfuti inoshandurwa kune nzira yakatwasuka, uye pfuti yekupuru inomhanya kubva kuruboshwe, kumusoro kana kumusoro pasi uye kumashure. Iwe zvakare unogona kumhanya uchidzokera shure kubva pasi kurudyi kana pasi kuruboshwe.
3. Inomira uye yakatwasuka nzira yekuyambuka. Paunenge uchipuruzira, svina nekudzoka kwenguva refu. Kana uchipuruzira kwenguva yechipiri, svina kumashure nekudzoka. Chinja kutungamira kwedhirowa nguva dzese.